के घटाइदैछ बुढीगण्डकीको क्षमता ? आरुघाट र खहरे नडुबाउँदा के हुन्छ फाइदा | Tungoon
के घटाइदैछ बुढीगण्डकीको क्षमता ? आरुघाट र खहरे नडुबाउँदा के हुन्छ फाइदा
काठमाडौं । सरकारले मुआब्जा वितरणमा बढी पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारलाई नडुबाइकन बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने तयारी गरेको छ ।
हाल एक हजार २०० मेगावाट क्षमतामा आयोजना अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बेला पछिल्लो पटक क्षमता घटाउने बहस समेत सुरु भएको छ । खहरे र आरुघाट बजारमा प्रति आना नै रु २५ लाख रकम मुआब्जाका लागि माग हुन थालेपछि ती क्षेत्र नडुबाईकन आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श सुरु गरेको हो ।
संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले सो बारेमा छलफल हुन सक्ने टिप्पणी गरेपछि क्षमता घटाउने तयारी भइरहेको अड्कल काटिएको हो ।
सरकराले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा प्रति रोपनी २० लाख रुपैयाँसम्म दिन तयार भएपनि आनाकै २५ लाख रुपैयाँ रकम माग हुन सकेपछि मुआब्जामा नै मोटो रकम खर्च हुन सक्ने देखिएको छ ।
आरुघाट र खहरे बजारमा प्रति हात नै एक लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको भन्दै स्थानीयबासीले समेत बढी मुआब्जा माग गरेका छन् । यद्यपी हालसम्म सरकारले आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण गरेको छैन ।
बढी रकम तिर्न समस्या हुने अवस्था आएपछि केही क्षमता घटाउन सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट पनि विषयहरु अगाडि बढेको देखिन्छ । वार्षिक इनर्जीको आधारमा हेर्दा ९०० मेगावाट बनाउँदा र १२०० मेगावाट बनाउँदा समेत तात्विक रुपमा फरक नपर्ने देखिन्छ । सो आयोजनाबाट मात्रै ४२८० गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । ९०० मेगावाट बनाउँदा समेत वार्षिक ऊर्जाको मात्रा ४००० गिगावाट घण्टाको आसपासमा रहेको छ ।
आरुघाट र खहरे बजारलाई नडुाबउँदाको अवस्थामा लागतमा समेत ठूलो घटबढ आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर त्यसका लागि सरकारले ठोस निर्णय भने गर्नु आवश्यक छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा समेत आयोजनाको क्षमताका विषयमा तीन फरक विकल्प दिएको थियो ।
त्यसमा कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन सकिने समेत उल्लेखछ । आयोजनाको कूल लागतको झण्डै ३५ प्रतिशत बढी लागत मुआब्जामा खर्च हुने देखिन्छ । मूल्य वृद्धि लगायतका कारण आयोजनाको लागत रु ३०० अर्ब पुग्दा समेत मुआब्जामा नै करिब रु ८० अर्ब जति लाग्ने देखिएको छ । आयोजनाले बारी चाहारको रु पाँच लाख २५ हजार र खेत चाहारको रु ६ लाख ४९ हजार बराबरको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ ।
तर आरुघाट र खहरे बजारका प्रभावितले उक्त मुआब्जा आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको बताउँदै आएका छन् । मुआब्जाा निर्धारण भएका क्षेत्रका बासिन्दाले समेत आयोजनाले समयमा मुआब्जा नदिएका कारण थप मुआब्जा रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसो छ आयोजनामा कर्मचारी अभावमा पनि मुआब्जा वितरणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रु १७ करोड ९९ लाख ९६ हजार मुआब्जाका लागि बजेट विनियोजन भएको भएपनि हालसम्म रु तीन अर्ब ९६ करोड अर्थात् २२ प्रतिशत मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय धादिङ र गोरखामा कर्मचारीको अभाव हुँदा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बारम्बार सरुवा हुनाका कारणले पनि मुआब्जा वितरण प्रभावित भएको छ ।
त्यसो त सरकारले पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग आयोजनाको बारेमा छलफल गरिरहेको छ । तर कुन ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै पनि सहमति भने हुन सकेको छैन । सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग भइरहेको पछिल्लो प्रगतिका बारेमा हालसम्म केही सार्वजनिक जानकारी दिएको छैन ।
Nextद्रुतमार्गका ६२ अग्ला पुल बनाउन ६ कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने
प्रधानमन्त्री ओली लाई भट्टराईको प्रस्ताव, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इमान्दार हो भने सबै काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्नु आग्रह
७३.९ प्रतिशत जनता किसान रहेको देशमा पाँच महिनामै ३४ अर्बको खाद्य पदार्थ आयात